သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခဲ့ ရတဲ့ ရွှေညီကိုအဖွဲ့ ကလူတွေ လက်ရှိ ဘာလုပ်နေကြသလဲ အလင်းပြ ခဲ့တဲ့ ကောင်းကျော် – Let Pan Daily
သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခဲ့ ရတဲ့ ရွှေညီကိုအဖွဲ့ ကလူတွေ လက်ရှိ ဘာလုပ်နေကြသလဲ အလင်းပြ ခဲ့တဲ့ ကောင်းကျော်
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်တုန်းက ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ရွှေညီကိုအဖွဲ့ ကိုတော့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိကြမှာပါနော်။ ငြိမ်းချမ်း၊ ကောင်းကျော်၊ ဝိုင်းချစ်၊ ရှဲဒိုး၊ ထက်ထက်တို့ ငါးဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဟာသပျက်လုံးတွေကို ဝါးလုံးကွဲရယ်မောရအောင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပျက်လုံးထုတ်ခဲ့တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်၊ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့လို ဆိုရမှာပါ။
သူတို့ငါးဦးထဲက ဦးရှဲဒိုး ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ဘဝရပ်တည်ချက်မျိုးစုံနဲ့ အဖွဲ့ကွဲခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဦးကောင်းကျော်က ရွှေညီကိုအဖွဲ့ဝင်တွေကို တမေးတည်း မေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် သူတို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခဲ့ဖူးကြတဲ့ဦးကောင်းကျော်တို့ “ရွှေညီကို” အဖွဲ့သားတွေ အခု ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ မေးလာကြသူများအတွက် ??? သဘင်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော် ပညာဆည်းပူးသင်ကြား လာကြပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ ပါမောက္ခ မစ္စတာ ကိုဗစ်ရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကြောင့် ဌာနအသီးသီးမှ ရာထူးကြီးကြီးတွေနဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။ ၁။ ဦးငြိမ်းချမ်း (စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၂။ ဦးကောင်းကျော် (စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၃။ ဦးဝိုင်းချစ်(လူသုံးကုန်လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၄။ ဦးထက်ထက်(ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ကိုင်းဘာတွေလုပ်နေကြလဲခဏခဏ ထပ်မမေးကြနဲ့တော့ ဒါဘဲ ဟားဟားဟားးး???” ဆိုပြီးရေးသား မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
သူတို့တွေကတော့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ဟာဒယရွှင်ဆေး မတိုက်ကျွေးတော့ပေမယ့် တစ်ဦးချင်းစီ သဘင်ပညာနဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေကြသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ အဆင်ပြေတာတွေ လုပ်ကြရင်း စားစရာရောင်း၊ တက်စီဆွဲနေရတဲ့ သူတို့တွေအကြောင်းကို ဦးကောင်းကျော် ကတော့ အရွှန်းဖောက်ပြီး မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
သညျးသညျးလှုပျ အားပေးခဲ့ ရတဲ့ ရှညေီကိုအဖှဲ့ ကလူတှေ လကျရှိ ဘာလုပျနကွေသလဲ အလငျးပွ ခဲ့တဲ့ ကောငျးကြျော
လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈ တဈခုကြျောတုနျးက ဝကျဝကျကှဲအောငျမွငျ ခဲ့တဲ့ ရှညေီကိုအဖှဲ့ ကိုတော့ ပရိသတျတှရေငျထဲမှာ မှတျမှတျထငျထငျရှိကွမှာပါနျော။ ငွိမျးခမျြး၊ ကောငျးကြျော၊ ဝိုငျးခဈြ၊ ရှဲဒိုး၊ ထကျထကျတို့ ငါးဦးနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပွီး ဟာသပကျြလုံးတှကေို ဝါးလုံးကှဲရယျမောရအောငျ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ပကျြလုံးထုတျခဲ့တဲ့အပွငျ ရုပျရှငျ၊ဗှီဒီယိုဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့တဲ့အဖှဲ့လို ဆိုရမှာပါ။
သူတို့ငါးဦးထဲက ဦးရှဲဒိုး ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျးက ကှယျလှနျခဲ့ပွီဖွဈပွီး ကနျြတဲ့အဖှဲ့ဝငျတှလေညျး ဘဝရပျတညျခကျြမြိုးစုံနဲ့ အဖှဲ့ကှဲခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဦးကောငျးကြျောက ရှညေီကိုအဖှဲ့ဝငျတှကေို တမေးတညျး မေးနကွေတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ သူတို့ဘာတှလေုပျနသေလဲ ဆိုတာ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ “သညျးသညျးလှုပျ အားပေးခဲ့ဖူးကွတဲ့ဦးကောငျးကြျောတို့ “ရှညေီကို” အဖှဲ့သားတှေ အခု ဘာတှလေုပျနကွေလဲ မေးလာကွသူမြားအတှကျ ??? သဘငျတက်ကသိုလျကွီးမှာ နှဈပေါငျး(၃၀)ကြျော ပညာဆညျးပူးသငျကွား လာကွပွီးနောကျ တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှ ပါမောက်ခ မစ်စတာ ကိုဗဈရဲ့ ထောကျခံအားပေးမှုကွောငျ့ ဌာနအသီးသီးမှ ရာထူးကွီးကွီးတှနေဲ့ နိုငျငံဝနျထမျးကောငျးမြားအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနပေါကွောငျး ဖွကွေားအပျပါသညျ။ ၁။ ဦးငွိမျးခမျြး (စားသောကျကုနျလုပျငနျး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ) ၂။ ဦးကောငျးကြျော (စားသောကျကုနျလုပျငနျးညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ) ၃။ ဦးဝိုငျးခဈြ(လူသုံးကုနျလုပျငနျး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ) ၄။ ဦးထကျထကျ(ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ) ကိုငျးဘာတှလေုပျနကွေလဲခဏခဏ ထပျမမေးကွနဲ့တော့ ဒါဘဲ ဟားဟားဟားးး???” ဆိုပွီးရေးသား မြှဝခေဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
သူတို့တှကေတော့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့အနနေဲ့ ပရိသတျတှေ ကို ဟာဒယရှငျဆေး မတိုကျကြှေးတော့ပမေယျ့ တဈဦးခငျြးစီ သဘငျပညာနဲ့ပဲ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနကွေသူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ အခုလို ကိုဗဈကာလမှာတော့ အဆငျပွတောတှေ လုပျကွရငျး စားစရာရောငျး၊ တကျစီဆှဲနရေတဲ့ သူတို့တှအေကွောငျးကို ဦးကောငျးကြျော ကတော့ အရှနျးဖောကျပွီး မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
မနနေိုငျဖွဈအောငျ ဆကျဆီကကြ ပုံတှေ တငျပေး လိုကျတဲ့ မကျြဝနျး
အသားကပျ အင်ျကြီလေး ဝတျကာ သူမရဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိလှနျးတဲ့ အလှတရားတှေ နဲ့ ပရိသတျတှကေို ရငျခုနျစပွေနျတဲ့ နနျးခငျဇယြော